Imibuzo Ebuzwa Njalo - I-Replica-watches.is
Q1. Yiziphi Izindlela Zokuhambisa Ezitholakalayo?
I-DHL, SF, EMS （EMS, ETK, EUB） ， FedEx
Q2. Ingabe Uyathumela Ngaphakathi?
Yebo! Sithumela emazweni amaningi, futhi ungahlala usithumela i-imeyili ku [i-imeyili ivikelwe] ukubheka ngendawo ethile. Ukuthola ukuthi siyathumela yini ezweni lakho qhubeka uye ekhasini lokukhokha bese usebenzisa imenyu eyehlayo ngaphansi kwe-'Kheli Lokuthumela 'ukubona ukuthi izwe lakho lifakiwe yini.
Onke ama-oda azodluliswa athunyelwe ngesevisi yakho yeposi yasendaweni. Imali ekhokhelwa amasiko nemisebenzi ayibalwa ngesikhathi sokuthenga.
Q3. Kuzothatha Isikhathi esingakanani Ukuthola Iphakethe Lami?
Ama-oda azothunyelwa kungakapheli amahora angama-72 futhi ukuphathwa kwempahla kuzoba izinsuku eziyi-7-10.
Inani lezinsuku eziyi-10-13.
Q4. Yiziphi Izindlela Zokukhokha Ezamukelekayo?
I-BTC (10-15% ivaliwe)
I-Western Union (10-15% ivaliwe)
Q5. Ingabe Ukuthenga Ku-inthanethi Kuphephile?
1.khokha i-oda kuwebhusayithi
2.Provide izixhumanisi zomkhiqizo noma izithombe, singabala inani, futhi sinikeze imininingwane ye-akhawunti yeWestern Union Nge-imeyili: [i-imeyili ivikelwe]
Sicela unikeze ikheli lakho lokulethwa eliphelele nenombolo ye-akhawunti, ukuze kusetshenzwe ngokushesha
Iwebhusayithi yethu isebenzisa i-HTTPS ukuqinisekisa ukuthi ikhadi lakho lesikweletu nolwazi lomuntu siqu aludalulwa.
1. Sebenzisa umthetho olandelwayo we-HTTPS ukuqinisekisa abasebenzisi namaseva ukuqinisekisa ukuthi idatha ithunyelwa kuklayenti nasesiphakeleni esifanele.
2. Iphrothokholi ye-HTTPS yiphrothokholi yenethiwekhi eyakhiwe ngephrothokholi ye-SSL + ye-HTTP yokudluliswa okubethelwe nokufakazelwa ubuqiniso. Iphephe kakhulu kune-http protocol futhi ivimbela idatha ukuthi yebiwe noma ishintshwe ngesikhathi sokudlulisa ukuqinisekisa ubuqotho bedatha.
3. I-HTTPS yisisombululo esiphephe kunazo zonke ngaphansi kwesakhiwo samanje. Yize ingavikelekile ngokuphelele, inyusa kakhulu izindleko zokuhlaselwa kwabantu maphakathi.
Q6. Ngifaka kanjani i-oda?
Q7. Ngabe ngidinga i-akhawunti ukufaka i-oda?
Cha, awudingi ukuba ne-akhawunti ozofaka kuyo i-oda amawashi aphindaphindwayo. Ungamane uthenge, ungeze izinto enqoleni, bese uhlola. Uma ufaka i-oda lakho, unganikeza ikheli le-imeyili lokuqinisekiswa kwe-oda ukuze ukwazi ukulandelela i-oda lakho
Q8. Kufanele ngithinte bani uma nginemibuzo?
Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi: [i-imeyili ivikelwe]
Q9. Ngingakhansela Kanjani Noma Ngiguqule i-oda Lami?
Ungaxhumana nensizakalo yethu yamakhasimende online nge-imeyili. [i-imeyili ivikelwe]
Q10. Ngilulandelela Kanjani I-oda Lami?
Ngemuva kokuthunyelwa kwephakeji, sizokuthumelela i-imeyili inombolo yokulandelela noma sixhumane namakhasimende ethu ukuthola izindaba zakamuva. (I-imeyili yethu:[i-imeyili ivikelwe])
Umbuzo iwebhusayithi: https: //t.17track.net
Q11. Ngingawubuyisa Kanjani Umkhiqizo?
Uma izinto zokusebenza zingafiki (kudonswe noma kulahlekile), ungaxhumana nesevisi yamakhasimende ukucela ukubuyiselwa imali noma ukuyithumela kabusha
Ngemuva kokuthola izimpahla, Kungakapheli izinsuku eziyi-15, uma unganelisekile, ungaxhumana nesevisi yamakhasimende ukucela ukubuyiselwa imali Isisekelo asiyisebenzisi
Inqubo yokubuyiselwa imali; thinta insizakalo yamakhasimende bese uthola ikheli lomamukeli (i-imeyili yethu:[i-imeyili ivikelwe])
Ngemuva kokuthola izimpahla futhi sizihlole, uma iwashi lisha, lingakaze lifakwe, sizohlela ukubuyiselwa imali ngokushesha futhi kuzodinga izinsuku eziyi-8-20 ukubuyela ekhadini lakho